शिव प्रकाश, (बोस्टन, अमेरिका )
प्लेनको इन्जिन ‘अफ’ हुने वित्तिकै सेलफोनको स्वीच ‘अन’ गर्छ एउटा म्यासेज आइसकेको छ– “आशुतोष, म तिमीलाई एक घण्टा पछि फोन गर्छु– गौरी ।”
समयको लामो फड्कोले साइनोको रंग झन् गाढा बनाएको छ । अतीतका मीठा अनुभूतिमा बाँचेका स्मरणहरु झन् वयस्क बनेर आशुतोषका मनभरी दौडिन थाल्छन् – कहिले प्रभासँग अनि कहिले गौरीसँग ।
वादलका थुम्काहरुसँग कतै ठोक्किदै, कतै छलिदै, कतै लुकामारी गर्दै स्वप्नभूमि अमेरिकाबाट उडेको जहाज विभिन्न देशका आकासको छाती चिर्दै मातृभूमि नेपालको माटोमा अवतरित हुन्छ । दिनले संध्याको पोल्टोमा टाउको लुकाइसकेको छ । अहिले साँझको पाँच बजिसकेको छ ।
प्लेनको ढोका कतिखेर खुल्छ ? घरदेशको सम्झनाले निथ्रुक्क भिजेको उसको मनमा अहिले छट्पटी र औडाहा छड्किन थालेको छ । आँखाभरि आठवर्ष अघिदेखि देखेका सपनाहरु छन् । ती आज साकार हुदैछन् ।
उसका आँखाका परेलीमा सधैं नाचिरहने, अन्तष्करणमा सधैं डुलिरहने र मस्तिष्कमा सर्धै खेलिरहने त्यो मातृभूमि ! आज आफ्नो अभागी निधार बल्ल त्यो मातृभूमिको चरणकमलमा अड्याउँदै छ । विगत दुःखै दुःखमा बगाएको भए पनि दुःख के हो यतिबेला उसले सबै भुलेको छ । ऊभित्र खुशी नै खुशी मात्र छ । “आखिर जीवनमा खुशी पनि आउँदो रहेछ– धेरै वर्षपछि मातृभूमिको माटोमा माथा टेकाउँदैछु ।” आशुतोषलाई अहिले यस्तै लागेको छ ।
प्लेनको सिँढीको अन्तिम खुड्किलो छोड्नु अघि ऊ टक्क रोकिन्छ । मातृभूमिको पवित्रमाटो टेक्नु अघि त्यो माटोलाई ढोक्छ । प्लेनबाट ओर्लिनेको लाइन एकैछिन अवरुद्ध हुन्छ । उसका अगाडि–पछाडि धेरै मान्छे छन् । जो त्यही प्लेनमा यात्रा गरेका थिए ।
पछाडिबाट एउटा आवाज आउँछ– “के गरेको यो लाईन जाम गरेर ? हा... हा... हा... यस्ता पनि मान्छे देखिए !” अनायास त्यो रुखो हाँसोको कर्कश आवाज उसका कानमा ठोक्किन्छ । त्यो आवाजले मुटुमा ढुङ्गा ठोक्किए जस्तो दुःखाउँछ उसलाई ।
“कसैको नभाको स्वाङ् !, बाटो छोड ए....” अर्को एउटा संवेदनाहिन उदण्ड आवाजले उसलाई धकेल्छ । अगाडि केही पर्यटकहरु छन् उनीहरु एकतमासले हेर्छन् । एउटाले सोध्छ– “के गरेको यो ?” उ विनम्रता पूर्वक मधुरो स्वरमा जवाफ दिन्छ – “मेरो देशको माटोलाई ‘स्यालुट’ गरेको ।”
ओरिपरिका अरु नेपालीले हाँसोको पात्र बनाउँछन् उसलाई । तर, पनि उ कसैसँग केही वाद–विवाद, अनुग्रह–आग्रह, विग्रह–पूर्वाग्रह नगरी अघि बढ्छ । मनमनै भन्ठान्छ– यस्तै रहेछ ढुंगालाई ढोग्नु धर्म मानिन्छ तर माटोलाई ढोग्नु अपराध ठानिन्छ । त्यो घटना एउटा दुस्वप्न जस्तो लाग्छ उसलाई । मनमनै धारे हात लाउँछ । आकासमा झण्डै उन्नाईस–बीस घण्टाको उडान अनि लण्डनको लामो ट्रान्जिट । बहराइनका थप केही घण्टा । झण्डै तीस–बत्तीस घण्टाको निरस, पट्यार र थकानलाग्दो यात्रा ! तै पनि आशुतोष पटक्कै थकित देखिदैन । उसको अनुहारमा बिहानीको किरणले चुमेको त्यो आफ्नै हिमालको चमक छ । जसलाई ऊ शिरको मुकुट ठान्छ । शरीरमा कलकल बग्ने ती आफ्नै देशका वयस्क खोलानालाको स्फूर्ति छ । जुन आफ्ना नसानसामा सधैं बगेको अनुभूत गर्छ । मनमा उमंगको गुँरास ढकमक्क फुलेको छ । जुन उसको दुःखमा पनि साथी बन्छ र खुशी दिन्छ ।
मातृभूमिसँग उसको सम्बन्ध त्यही छ– जुन सम्बन्ध नङ र मासुको हुन्छ । मुटु र श्वासको हुन्छ अनि जून र ताराको हुन्छ ।
तर विडम्बना ! समयको भँगालोले उसलाई भूगोलको कुनै सुदूर कुनामा लगेर धेरै वर्ष थन्क्याइदियो । विधाताको इच्छा– उसलाई माता र मातृभूमिको काख अनि परिवारको मायाबाट वर्षौ अलग गरायो । अन्ततः आज एक निराश्रित एकाङ्की जीवनबाट गृहस्थ जीवनमा फर्केको छ । मानिस जस्ता देखिने मान्छेहरुको जंगलबाट फेरि मानिस भेट्न आएको छ ।
बाहिर उभिएका सयौ अपरिचित अनुहारमा आँखा दौडाउँछ । त्यो भीडमा टाढैबाट प्रभालाई देख्छ । खुशीले प्रफूल्ल हुन्छ । झलमल्ल जून–तारा झुल्केको आकाश जस्तो हुन्छ मन तर एकाएक झट्ट गौरी सम्झिन्छ । अहिले आफू फेरि एउटा दशगजामा उभिएको जस्तो लाग्छ उसलाई । एकतिर प्रभा र अर्कातिर गौरी ! आँखामा प्रभा, मनमा गौरी ! एउटा अन्र्तद्वन्दले उसको अन्र्तमनमा अर्को युद्ध चलाउँछ एकछिन् ।
साँझ झमक्क परिसकेको छ । घरमा पुग्छ– अँध्यारो छ । बत्तीको स्वीच अन गर्छ– बल्दैन । धेरै अँध्याराहरु मध्ये लोडसेडिङको सघन अँध्यारोमा देश डुबेको छ । उसलाई लोडसेडिङको तालिका थाह छैन । छोराले भन्छ– “बाबा, बत्ती छैन । राती बाह्र बजेमात्र आउँछ ।”
बल्ल उसलाई थकानको महशुस हुन्छ । लखतरान शरीरलाई सोफामा एकछिन् लडाउँछ । उठेर नुहाउँन बाथरुम तिर जान्छ र धारा खोल्छ– पानी आउँदैन ।
“खै मैले धारा खोल्न जानीन कि क्या हो ?” श्रीमतीतिर हेर्दै भन्छ ।
“नजानेको हैन, पानी नभएको हो । धारा रित्तो छ । एकदिन विराएर पानी आउँछ– जम्मा दुई घण्टा । बिहानै आयो अब पर्सी मात्र आउँछ ।” श्रीमतीको कुराले ऊ एकछिन् विलखबन्दमा पर्छ । श्रीमतीका अनुहारमा एकटक लाउँछ । मोती हराएको नाग जस्तो त्यसै ओलिएर सोफामा फेरि पल्टन्छ ।
“रित्तोधारा ....! रित्तोधारा ....!” एक्लै बोल्छ ।
“यसमा त्यस्तो अचम्म मान्नु पर्ने कुरा म त केही देख्दिन । यहाँ त यो सामान्य हो । गुण्डा, फटाहा, हत्यारा, लुटेरा र डनहरु मारिए भने जुलुस निस्किन्छ, बन्द–हडताल हुन्छ अनि शहीद घोषणा हुन्छ तर देश आफैं शहीद हुन लागेको छ । यो सबै सामान्य भएको छ । सबैलाई मान्य भएको छ । ”
श्रीमतीले भनेका कुरामा केहीबेर गम्भीर हुन्छ । हेर्छ– प्रभाको अनुहारमा यौवनका आभाहरु उडिसकेको देख्छ । शरीरमा वैंशको वशन्त छैन । मनको मर्मको कितावमा पीडाका अक्षरहरु पढ्छ । वेदनाका भाषा सुन्छ ।
सोच्छ– म एक अपराधी हुँ ! उ जिन्दगीको हिसाबकिताब गर्न थाल्छ । कमाएको भन्दा गुमाएको नै बढी आउँछ शेषमा । विगत र वर्तमानलाई तौलन्छ– वर्तमानको पल्ला अति हलुको देख्छ । ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्छ– उस्तै देख्छ आफ्नी स्वास्नी प्रभा जस्तै । यौवनको भीख अब कोसँग माग्ने ? यौवन गुमाएर कमाएको पैसाको अर्थ खोज्छ– केही पाउँदैन ? झन् लखतरान थाके जस्तो लाग्छ उसलाई । मैनबत्तीको मधुरो उज्यालोतिर गहिरो नजर लाएर जीवनको परिभाषा खोज्छ– जीवन एक ठट्टा पनि रहेछ जस्तो लाग्छ ।
ए, मान्छे ! हैन कहाँ हरा’....? प्रभाको आवाजले झस्किन्छ । “यस्तै हो । अँध्यारोसँग विरक्ति लाग्यो होला । हाम्रो त प्रीत गाँसिसकेको छ ।” प्रभा मुस्कुराउन खोज्छे ।
“मैले कुरा बुझिन ।” आफ्ना उदास आँखा प्रभाको अनुहारमा डुलाउँछ । फिक्का उज्यालो जस्तो लाग्छ ।
“मैले धेरै अँधेरा रातहरु एक्लै काटीसकेकी छु । त्यसैले आजको यो अँधेरो मलाई अँधेरो जस्तो लागेको छैन । तपाइँको उपस्थिति नै यो घरको उज्यालो हो ।”
चुपचाप आशुतोष चुपचाप नै छ । फेरि आफ्ना आँखा प्रभाको अनुहारमा दौडाउँछ । प्रभाको अनुहारमा कताकता केही खुशी जस्तो पनि देख्छ ।
“यस्तै हो भने त तपाइँ यहाँ चारदिन पनि टिक्नु हुन्न । यहाँ ‘छैन’सँग मित र ‘अँधेरो’सँग प्रीत लाएर बाँच्नु पर्छ । दुःखसँग हाँस्नु पर्छ । देशमा अब ‘छैन’ बाहेक केही बाँकी छैन ।”
उसले फेरि पनि कुरा बुझ्दैन र सोध्छ– “ प्रभा, के भन्न खोज्या ?”
“छैन अर्थात केही छैन । देशमा पेट्रोल छैन, मट्टीतेल छैन, ग्यास छैन, पानी छैन, बत्ती छैन । यो सबै सामान्य भैसकेको छ । मान्छेमा नैतिकता छैन, इमान छैन, धर्म छैन, मानवता छैन, संवेदशीलता छैन । मान्छेभित्र हुनु पर्ने जे हो त्यो नै छैन । यो सबै झन् सामान्य भैसेकेको छ । खोज्दै गयो भने केही ‘छैन’ ।”
“भनेपछि देशमा ‘छैन’ मात्र बाँकी छ ।” आशुतोष फिसिक्क हाँस्छ तर भित्रभित्रै उसको मन दुःखेको छ । देशको पीडा अनुहारमा झल्किन्छ ।
“ल म तातो चिया बनाएर ल्याउँछु ।” प्रभा भान्सातिर लाग्छे ।
“मलाई थाह छ तिमी थाकेका छौं तर त्योभन्दा बढी म थाकेकी छु तिम्रो पर्खाइमा । स्वागत छ तिमीलाई मातृभूमिमा । भोलि.............. !”
गौरीको आवाजले उसलाई विगतको त्यो लामो बाटोमा एकछिन् फेरि हिँडाउँछ, स्मरणका उकाली–ओरालीहरु चढाउँछ–ओराल्ःछ । औपचरिकताका केही शालिन शब्दले गौरीप्रति आभार देखाउँदै “हुन्छ” मात्र भनेर फोन विसाउँछ । अनि स्मरणको उही बाटोमा हिड्छ जुन बाटो उसको मानसपटलमा हिडिरेको छ ।
आशुतोषको मष्तिष्कमा गौरी र गौरीको मष्तिष्कमा आशुतोष प्रेमका एक अनौठा विम्ब र प्रतीक भएर बसेका छन् । यता जीवनमा प्रभा छे !
चियाको कप नजिकै राख्दै सोध्छे– “यात्रा कस्तो भयो त ?” प्रभाको आवाजले उ आफू अहिले फेरि घरमा भएको महशूस गर्छ । आत्मग्लानीको पसिनाले एकचोटी मन भिजाउँछ । गौरीलाई एकछिन् विर्सिन्छ ।
“अँ ठीकै भयो तर अलि थकित भए जस्तो भएको छ । के भन्नु प्रभा दिक्क लाग्छ सम्झिदा पनि ....! पछि भनुला कुनै दिन ।”
आठ वर्षपछि भेटेको लाग्नेसँग बेलाबेलामा प्रभाका आँखा ठोक्किन्छन् । आफैंमा कताकता अलिकति लज्जा, अलिकति संकोचले प्रभालाई एक अनौठो दूरीमा राखेको छ । अनि लज्जा र संकोच जस्तै केही सन्देहले पनि पछ्यारहे जस्तो लाग्छ प्रभालाई ।
आशुतोषलाई भने आफ्नै स्वास्नी पनि कस्तोकस्तो भरखरै मात्र चिनेको जस्तो हुन्छ । कुरा गर्न पनि कताकता अप्ठ्यारो जस्तो । कुरा गर्ने कुरा पनि केही नभए जस्तो । साँच्चै भन्ने हो भने भरखर ‘लभ’ पर्न सुरु भए जस्तो ! कुरै नआउने, आए पनि छिट्टै सिद्धिने जस्तो । एउटा पछि अब अर्को के कुरा गरुँ जस्तो भइरहन्छ ।
उनीहरु बीच । त्यो समयले एउटा लामो रेखा तानेको छ । थाहा छैन छोट्याउन यो समयले कति समय लिन्छ ?
बातैबातमा ........ ! र, बातैबातमा रात वित्छ । विहानीको सुनौलो स्पर्शले धरती उज्यालो भैसकेको छ प्रभाको मन जस्तै । उठेर नुहाउन जान्छे । चिया लिएर आउँछे । आशुतोषको छेउका बसेर भन्छे– “उठ्न अलि अबेला भएछ तर आहा ! आज मन कति चंगा भयो ।” आशुतोष मुस्कुराउँछ ।
“गौरी पर्खिरहेकी होली, ओहो ! एक बज्न लागिसकेछ ।” हतारहतार निस्कन्छ ।
पिपलबोटमुनी गौरी गाडी रोकेर बसिरहेकी छे । एउटा मीठो मुस्कानले स्वागत गर्दै मित्रताका हात निशङ्कोच अघि बढाउँछे र भन्छे– “वेल कम माइ डियर आशु ! तर मैले हिजै भनेकी थिइन, एक बजे भनेर । पाँचमिनेट ढिलो भयौ नि । खोइ त अमेरिकन टाइम ?” प्रश्नसूचक दृष्टिसँगै गौरीका प्रेमिल आँखा आशुतिर एकोहोरिन्छन् ।
“सरी” भन्दै लामो मुस्कान छोड्दै गौरीको अनुहार तिर आफ्ना आँखा विछ्याउँछ र सोध्छ– “हामी कहाँ जान्छौँ त ?”
“म जहाँ लान्छु त्यही ।” गौरीको बोलाई उस्तै छ पहिलेकै जस्तो भाववाचक र अलि चर्को ।
गाडी तीनकुनेबाट मोडिएर भक्तपुरको हाइवेतिर लाग्छ । कुराकनीको शिलसिला सुरु हुन्छ ।
“अनि यत्रो वर्षपछि फर्किएको तिमी, के फरक देख्यौ त देशमा ?”
“धेरै देखेँ, गौरी । नेता भनाउँदा भष्माशूरहरुले बोली फेरेछन् । पहिले मजाले नेपाली बोल्न जान्नेहरुले आज नेपाली भाषा विर्सिएछन् । हिजोसम्म दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी ढल्काएर दरबार छिर्ने तिनै अनुहारहरु आज अर्थोकै के–के लाउन थालेछन् । भेषभूषा त फेरेछन् तर अनुहार र व्यवहार फेरेका रहेछन् । भित्रका उही सधैका भष्मासुर,अझै भष्मासुरै रहेछन् !
“अनि अरु नि ?” आफ्ना ठूला–बाटुला चंचल आँखा नचाउँदै सोध्छे ।
“गौरी, कताकता मेरो देश, आफ्नै देश हो कि हैन जस्तो पनि लाग्यो । देश परदेश गएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो । कि त्यो परदेश नै मेरा देश भित्रिएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो । खै के हो ? देशमा एकप्रकारको फ्युजन देखेँ । यो फ्युजन हो वा मेरो कन्फ्युज थाह छैन !” उसले विष्णुविभूका कविताका यस्तै केही भावहरु पनि सम्झन्छ र थप्छ– “स्वप्नदर्शीहरु पनि सायद सबै शहीद भए !”
“अर्थात .... ?” उ छिट्टो र छोटो बोल्छे । शब्दका चास्नी घोल्न सिपालु छे ।
“सुन– यो देशका गाउँ–शहरमा पहिले देशभक्ति र देशप्रेमका गीतहरु सुनिन्थे । अहिले हेर त– शीलाकी जवानी रे ! मुन्नी बदनाम हुई रे ! दूधेवालकदेखि जाउलेबूढाहरुसम्मका मुखमा झुण्डिएको ! सिनेमाहरुमा राष्ट्रप्रेम र मानवता हुन्थ्यो । अहिले त जताततै देहदर्शन मात्र देख्छु ! टीभीमा । पत्रपत्रिकामा । मोडल बन्नलाई नाङि.्गनै पर्ने भएछ । जताततै डिंकाचिकाको नक्कल । जस्ताको तस्तै । हैन के हो यो ? कता जादैंछ नयाँपुस्ता र यो नयाँ पुस्ताले डोर्याउने समाज ?
“गौरी, देशमा छाएको अँध्यारोसँगै सँस्कारका बत्तीहरु सबै निभे जस्तो लाग्यो मलाई । चेतनाका जुनकीरीहरु सबै मरिसके जस्तो लाग्यो ।”
गौरी लामो शास तान्छे । “हो, हईऽऽ... कस्तो भयो समाज” भन्दै “अनि म नि ?” उही चंचलेपाराले सोध्छे ।
गोरो वर्णकी गौरी । बाटुला चंचले गाजलु आँखा । सलल बगेको हलुका रातो कपाल । हात गोडा उस्तै सलक्क परेका । जीउडाल उस्तै चटक्क मिलेको अझै । हल्का कालो रंगको टिसर्ट । अलि उदरतापूर्वक खोलिएको छाती । उसका आँखामा झनै वयस्क देखिन्छे गौरी ।
आफ्ना आँखा निर्वाध डुलाउँछ उसको शरीरमा । जूनको उज्यालोमा विताएका पल्लवित पलहरु सम्झन्छ । गोधुलीमा हराएका मधूर साँझहरु सम्झन्छ । शहरबाट कतै टाढा खेतबारीमा विताएका उज्याला दिनहरु सम्झन्छ । गौरीसामू गौरीसँगैका विगतमा एकछिन् हराउँछ । गौरीको गालाको चिटिक्क परेको कोठी जस्तो सधैं गालामै टास्सिउँ जस्तो लाग्छ उसलाई । हाँस्दा फक्रिएको गुलाफ जस्तो देखिन डिम्पल जस्तै उसको मनमा सधैं फक्रिरहुँ जस्तो लाग्छ ।
सोच्दासोच्दै आफ्नो मन नेताहरुको आचरण जस्तै खराब जस्तो पनि लाग्छ । सत्ताको सिंहासनमा बसेका नेताले जस्तै मनका सिंहासनमा बसेकी गौरीलाई म किन निकाल्न सक्दिन ? आफैलाई प्रश्न गर्छ ।
गौरीले एक्कासी गाडीको ब्रेक ध्याच्च लाउँछे । उ झस्किन्छ र गौरीका हात समाउन पुग्छ । कताकता असजिलो महशुस गर्छ । अनुहार अलि फिक्का हुन्छ । ग्लानीको अनुभूति अनुहारमा उत्रिन्छ ।
गौरी मुस्कुराउँदै बोल्छे– “त्यसैले ब्रेक लगाएको हुँ । कहाँ हराएको । बोस्टनका समुद्र किनारका ‘बीच’ र शहरका ‘वीच’हरुले मन उतै ताने कि क्या हो ? बडो शालीन र भद्र बनेर बसका थियौ नि ! डर लाग्यो ?”
“नत्र किन समायौ त हात ?”
आशुतोष हाँस्छ । गौरीले त्यो हाँसो बुझ्छे र उ पनि हाँस्छे । दुबै एकछिन् रोमान्टिक हुन्छन् ।
खै मेरो बारेमा त केही भनेनौ नि ? “कस्तो ‘गुफी’ जस्तो हँऽ तिमी ? नो कमेन्ट ? फेरि ब्रेक हानौ कि क्या हो ? अब त ब्रेक हैन एक्सिलेटर दवाउँछु र उडाउँछु तिमीलाई । कसैले नभेट्ने ठाउँमा पु¥याउँछु नि !”
“तिमी, तिमी जस्ती रहिनछौ, गौरी !” मुसुक्क हाँस्दै वाचाल बोली बोल्छ आशुतोष ।
“अर्थात ?” गौरीका आँखामा आवेगको एउटा लघु विम्ब झलक्क झल्किन्छ तर आशुतोषलाई थाह छ प्राय नारीहरुलाई नराम्री भन्नु हुदैन भन्ने कुरा । अनि धेरै पुरुषले नारीलाई कहिल्यै नराम्री पनि भन्दैनन् । नारीप्रति पुरुषहरुको एउटा जन्मजात व्यवहार हो । त्यसमा पनि गौरी निक्कै राम्री देखिन्छे । उमेरले मान्छेलाई खान्छ भन्छन् तर उसले उमेरलाई खाएकी छे जस्तो लाग्छ ।
“अर्थात गौरी ! तिमी, तिमी जस्ती नभएर तिमीभन्दा राम्री रहिछौ । झन् राम्री ! सुन नउगेलिने र तिमी बुढी नहुने रहस्य एकै हो कि क्या हो ?”
आशुतोषको कमेन्टले गौरीको मुखबाट हाँसोको बाक्लो फोहोरा फुट्छ । अनुहारमा ढकमक्क गुराँस फुल्छ । “गीभ मी फाइभ” गौरीको खुशीलाई आशुतोषले साथ दिन्छ । दुबै धक खोलेर हाँस्छन् । गाडी मन्द वेगमा दौडिरहेछ । हावाका हलुका स्पर्शले गौरीका कपालका रौ अनुहार भरी आफूखुशी सल्बलाउँछन्। हेरुँ हेरुँ लाग्ने गरी ! बेलाबेलामा ती कपालका केस्रा आसुतोषका गालासम्म ठोक्किन आउँछन् । जिस्किन आउँछन् ।
लामो ग्यापको अनुभूति र अनुभवहरु बाड्दै यात्रालाई अगाडि बढाइरहेछन् तर दुबैलाई लाग्छ उनीहरु बीच त्यस्तो लामो ग्याप कहिल्यै भएको थिएन । आफ्ना विगतलाई कति छिट्टै वर्तमानसँग हिडाइरहेछन् आफुसँगै उनीहरु ।
सडकको किनारमा एकछिन् गाडी रोकेर गौरी एकतमासले आशुतोषलाई हेर्छे । अनि छिनमै आँखा बन्द गरेर भन्छे– आहा ! मनका आँखाले हेर्दा तिमी झन सुन्दर देखिन्छौ ।
”तर, हामी कहाँ जादैछौ ?” आशुतोषको कौतुहलता तपक्क तप्किन्छ । आँखा गौरीको अनुहारमा विसाएको छ उसले पनि ।
“आइपुगियो ।” नभन्दै गाडी नगरकोटको एक भव्य होटलको आँगनमा पुगेर रोकिन्छ ।
“हामी यहाँ गौरी ?” आफ्ना अमुक आँखा गौरीतिर लगाउदै सोध्छ ।
“हो यहाँ, जस्ट फलो मी !” लाग्छ यो कुनै कमाण्डरको आदेश हो । ऊ गौरीका पाइला पछ्याउँदै एउटा सानो सेपरेट डाइनिंग रुममा छिर्छ । होटलमा सबैले गौरीलाई ‘म्याम’ भन्दै नमस्कार गर्छन् । सधै आउने ग्राहक जस्तो ! नजिकबाट चिनेजाने जस्तो गरी ! ऊ अल्मिलिन्छ । किन हो ? के हो ? गौरीलाई कसरी चिने यी सबैले । गौरी बैंकमा काम गर्छे ऊ एउटी बैंकर हो । यो होटलसँग उसको के रिलेशन ?
“ह्याभ अ सीट । ह्वाट उड यू लाईक टु ड्रिंक ?”
आशुतोष गौरीको विपरित कुर्सीमा बस्छै गौरीको प्रश्न उतै फर्काउछ– “तिमी के पिउँछौ नि ?”
“म आज वाइन पिउँछु ।” अवाक बोल्छे गौरी ।
आशुतोषलाई मनै खलबल्याउने, आँखै तिर्मिराउने आश्चार्यका रंगीचंगी फूलहरु फूले जस्तो लाग्छ आफ्ना ओरिपरी ! “यो केटी काठमाण्डुदेखि यहाँसम्म ड्राइभ गरेर आएकी छे । वाइन पिउँछु भन्छे । यस्तो होटलमा ल्याएकी छे । फर्किदा गाडी कसरी चलाउँछे ?” आफैभित्र केही प्रश्न उब्जिन्छन । उ तिनै प्रश्नमा एकछिन् हराउँछ ।
“चिन्ता नगर फर्किदा मसँग मेरो ड्राइभर कर्णध्वज हुनेछ ।” सायद तिमीले यही सोचेका होलाउ, हैन त ?
मन्द हाँसोसाथ सहमतिको टाउँको हल्लाउँछ आशुतोष ।
केही स्यान्क्स गौरीले अर्डर गरिसकेकी छे । चियर्स......... । दुबैका गिलास बज्जछन् ।
“भन आशु, कस्तो छ अमेरिका ?”
“मान्छे जस्तै छ ।”
“मेरो प्रश्न त सद्दे नै हो तर उत्तर किन पागल ?” गौरीले तीखा नजरका वाँण र लोभलाग्दो मुस्कान एकसाथ छोड्छे ।
“देखेको मान्छे र बेहोरेको मान्छे फरक हुन्छ, गौरी । त्यस्तै हो सुनेको अमेरिका र भोगेको अमेरिका पनि फरक छ ।”
“कस्तो फरक ?”
मान्छेभित्रको मान्छे जस्तै छ अमेरिकाभित्रको अमेरिका । अणु–परमाणु र जीवाणुहरुको देश हो अमेरिका । अहिले यति नै, अरु कुरा गर्दै गरौंला ।
“ओ, मिस्टर ! धेरै कुरा ‘फ्री’ छ रे नि त्यहाँ ?” गौरीका आँखाका तिखा हेराईको अर्थ बुझ्छ ।
“हो म्याम ! भावना नै मूल्यहिन भएपछि अरु कुराको मूल्य के हुन्छ ? तिमी नै अनुमान लगाऊ । तर, मैले जीवनमा कुनै पनि ‘फ्री’ को उपयोग गरेको छैन ।” एकछिन् हाँस्छन् दुबै अनि चुपचाप हुन्छन् । त्यो मौनतामा एकछिन् आँखा–आँखा बोल्छन् ।
गौरीले आशुतोषको हात तान्छे र प्रेम र सम्मानको एक चुम्बन चुप्प पार्छे । खिसिक्क हाँस्छे । धन्यवादको प्रतिउत्तरमा मुन्टो हल्लाउँछे ।
“भाइ, म्यानेजनर सा’बलाई पठाइदेऊ त ।” वेटरतिर हेर्दै भन्छे । आशुतोष झन् छक्क पर्छ । मनमा अनेक शंका–उपशंकाको दोहोरीलत्ता चल्छ । यो होटल ! म्यानेजर ! सबैसँग चिनजान ! के हो ? ‘अलमल गोत्र आमा एक बाउ सत्र’ जस्तो हुन्छ उसलाई ।
“म्याम, सर मिटिङ्मा हुनुहुन्छ रे, एकै छिन पछि आउँछु भन्नु भा’छ ।”
“ओके नो प्रब्लम, थ्यांक्यू...” गौरीले वेटरलाई भनेको वाक्य सिध्याउन नपाउँदै पछाडिबाट एउटा आवाज आउँछ– “हजूर, नमस्कार ! म कर्णध्वज ।”
गौरी उठ्छे । मुसुक्क मुस्कुराउँछे र छेउमै बस्ने संकेत गर्छे । आशुतोषले गौरीको हाँसोमा भिन्नता पाउँछ । गौरीको अहिलेको यो हाँसो र केहीबेर अघिसम्मको त्यो हाँसोमा फरक लाग्छ उसलाई । “के मान्छेपिच्छेको हाँसो पनि फरक हुन्छ ? कतै त्यो कस्मेटिक हाँसो त थिएन ?” उसलाई कताकता मनको बाघले लखेट्छ । ‘नारीको शत्रु सुन्दरता हो’ भन्छन् हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ । “को हो कर्णध्वज ?” गौरीभन्दा अघि प्रश्नको एउटा पहाड उभिन्छ उसका सामू ।
शूटबुटको शुभ्र पहिरनमा शालीन बोली र भ्रद स्वाभावको जस्तो लाग्ने कर्णध्वजले खल्तीबाट चेक निकाल्दै मित्रताका हात आशुतोष तिर बढाउँछ । चेक आशुतोषको हातमा थमाउँछ ।
“भद्र हाँसो हास्दै भन्छ– “धनले धन कहिल्यै दिदैंन, लिन्छ मात्र । मनले हो दिने त । भौतिक रुपले तपाइँभन्दा हामी अझै विपन्न छौं तर यसको अर्थ त्यो होइन कि हामीसँग धन धेरै भएर दिएको हो । यो त मनले दिएको हो, खासमा गौरीको मनले । तपाइँले गरेको एक असल कार्यका लागि एउटा सानो सहयोग मात्र हो । त्यो यज्ञका लागि अलिकति चरु सम्झिनुस् यो र स्वीकार्नुस आशुतोषजी ।”
गौरी बीचमा बोल्न खोज्छे । एकछिन गौरी भन्दै गौरीलाई रोक्दै कर्णध्वज फेरि बोल्छ– “वाइ द वे मलाई थाहा छ अमेरिकाको दुःख । म सात वर्ष दुःख गरेर फर्किएको हुँ । होटल म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गरेर । मलाई तपाइँ र तपाइँको दुःखको कमाइले गर्न लागेको त्यो सामाजिक कामको बारेमा गौरीले सबै बताएकी छिन् ।”
“मलाई एउटा कुराले असाध्यै प्रभाव पारेको छ आशुतोष । आफ्नो जन्मदिनका नाउँमा मान्छेले उडाउने हजारौं रुपिया तिमीले तिम्रो गाउँको स्कुललाई जन्मदिनको उपहार भनेर दिएको चन्दाले मेरो मनमा एउटा अमिट छाप पा¥यो । अनि तिमीले त्यही स्कुलमा स्थापना गरिदिएको अक्षयकोश, आफ्ना बाबुको नाममा स्थापना गरेको प्रतिष्ठान । यो सबैमा तिम्रो दुःखको कमाइ त्यो धनले भन्दा पनि तिमीभित्रको त्यो मनले गरेको हो जस्तो लाग्यो । मैले यो कुरा कुनै अखबारमा पढेको थिएँ । त्यतिबेला तिमीभन्दा सायद म बढी खुशी थिएँ होला ! मेरो मित्रको महानता देखेर ।” गौरी एकसासमा बोल्छे ।
आशुतोषका आश्चर्यवोधक आँखाहरु घरी गौरीका, घरी कर्णध्वजका आँखासँग ठोकिन्छन् । तर, कर्णध्वज हो को ? ओठमा मुस्कान भए पनि मनमा एउटा आँधीहुरी चलिरहेको छ ।
“वाइ द वे आशुतोष उहाँ मेरो श्रीमान् कर्णध्वज ! अहिले यही होटलको एज्युकेटिभ म्यानेजर ।” ऊ तीनछक्क पर्छ । सपना जस्ता लाग्छन् उसलाई यी सबै । यो सबै कुनै एउटा पुरानो, सभ्य र शालिन सिनेमा हेरे जस्तो पनि लाग्छ । एकछिन् एकतमासले हेर्छ दुबैका अनुहार । छोटो मौनता पछि सबै मुस्कुराउँछन् ।
“गफ गर्दै गरौ म आइहाल्छु, अनि लागुँला नि हुन्न ?” कर्णध्वज बाहिरिन्छ ।
“नो हग ?” गौरीले मन खोल्छे । गौरीको उदारताको पर्खाइमा बसेको हुन्छ आशुतोष पनि । दुबैले एकछिन् आँखा चिम्लिन्छन्, लामो सास तान्छन् ।
“यतिसम्म त नैतिकताले पनि छुट दिन्छ नि हैन त आशु ! अनि तिम्रो र मेरो कथाले पनि मागेको हुन्छ नि हैन र ? अहिलेका सिनेमामा जस्तो !” दिल खोलेर हाँस्छे गौरी फेरि ।
“आशुतोष तिमीले जानेबेलामा भनेका थियौ नि– हामी जीवनसाथी नभए पनि जीवनभरको साथी हुन सक्छौ भनेर । मैले सधैं तिम्रो त्यही वाक्यलाई सम्झे, सोचेँ र मनन गरेँ । तिमीले भनेजस्तो प्रेम र विवाह फरक हो भन्ने छुट्याएँ । आखिर सम्भव पनि त थिएन ...। अन्ततः तिम्रो अवतारको रुपमा कर्णध्वजलाई मैले मेरो प्रेमी र पति दुबै स्वीकारेँ र उसँगै खुशी हुने प्रयत्न गरेँ । गरिरहेको छु र सायद गरिरहने छु तर एक शर्तमा...... ।
“कस्तो शर्त ? गौरी !”
“पछि भन्छु कुनै दिन......।” उसले वाक्य टुङ्ग्याई ।
तर गौरीले अहिलेसम्म बताएकी छैन, त्यो शर्त .... ! आशुतोष सोच्छ– हो, जीवनपटमा जिन्दगी एक ठट्टा पनि रहेछ ।
जनवरी ०६, २०१२
(नोटः जैमली कथा संग्रहको गौरी कथाको विनिर्माण कथा)